Angola fizahan-tany dia manana drafitra lehibe miaraka amin'ny Board of Tourism momba ny fizahantany
Home » Vaovao momba ny fizahan-tany any Afrika » Angola fizahan-tany dia manana drafitra lehibe miaraka amin'ny Board of Tourism momba ny fizahantany
Tsiky daholo izany tamin'ny Birao fizahantany afrikanina (ATB) ny filoham-pirenena dia nihaona tamin'ny solontena avy amin'ny minisiteran'ny fizahan-tany Angolan, ny Birao fizahan-tany Angolan, ary ny filohan'ny Angolan Woman in Business & fizahan-tany talohan'ny nanombohan'ny AWIBT tamin'ny fomba ofisialy.
Samy nanaiky ny hiara-miasa akaiky amin'ny ATB ny minisiteran'ny fizahan-tany sy ny birao fizahan-tany Angoley, satria ny filoha Andriamatoa Chuthbert Ncube dia nanokana fotoana niarahaba ny Vehivavy Angoley tao amin'ny Koperativa ara-barotra sy fizahan-tany satria nosoratana ho mpikambana ao amin'ny Affiliate izy ireo ary ny filohany Angelina dia voatendry ho Ambasadaoro ho an'ny Angola Martha Diamantino, ity dia hahita fomba mivantana sy mahomby kokoa amin'ny marika, Marketing, ary hampiroborobo an'i Angola ho toerana fizahan-tany nataon'ny mpizahatany.
Nasaina ho mpiara-miasa stratejika amin'ny hetsika i ATB.
Ny fifanakalozan-kevitra sy ny fifampiraharahana roa tonta dia nifanarahan'ny roa tonta mba hiara-miasa amin'ny fanatanterahana ireo tetik'asa fampandrosoana sy fiaraha-miasa maharitra eo amin'ny lafiny toekarena sy toekarena ao amin'ny Faritra.
Ny tanjon'i Angola dia ny hanova sy hanamora ny toekarena hanomezana toerana lehibe ny fizahantany ho mpamorona asa lehibe ho an'ny olona maherin'ny 30 tapitrisa, ary hametraka an'i Angola eo amin'ny sarintany manerantany amin'ny alàlan'ny hetsika fizahan-tany.
Ny talen'ny fizahan-tany afrikanina Cuthbert Ncube dia niresaka tamim-pientanam-po momba ny fampandrosoana ny vondrom-piarahamonina afrikanina tamin'ny alàlan'ny hetsika sy tetik'asa fizahan-tany maharitra. Ny Pre-Launch of Angola Women in Business & Tourism Cooperatives dia nankasitraka ny fanatrehan'ny Dr. Angela Braganca avy amin'ny Minisiteran'ny sekreteran'ny kolotsaina sy ny fizahantany ary ny iraka manokana avy amin'ny Departemantan'ny National Da Cultura Dr Euclides Da Lamba ary ny Sefo Mpanatanteraka ao amin'ny birao fizahan-tany Angola Dr Simao Pedro.
Ny ATB Chair dia naneho ny fankasitrahany lalina ny AWIBT-C amin'ny ankapobeny ho amin'ny fandraisana andraikitra lehibe amin'ny alàlan'ny fitarihana ny sain'izao tontolo izao amin'ny fikambanana iray manitsakitsaka ny lalana izay hanova an'i Angola sy ny faritra amin'ny alàlan'ny fampanjariam-bola maharitra ho fanohanana ny fanomezan-danja ny vehivavy.
Misy ny voaporofo afrikanina izay manao hoe: “manabe lehilahy manabe olona iray, fa raha mampianatra vehivavy dia mampianatra firenena.” Amin'io sehatra io no ireharehan'ny ATB fa anisan'ity fandraisana andraikitra ity, Fikambanan'ny Vehivavy matanjaka sy hendry izay manana tanjona hampivoatra ireo Vondrom-piarahamonina Afrikana amin'ny alàlan'ny hetsika sy tetik'asa. "Azontsika atao ny milaza fa i Angola amin'ny maha firenena dia eo am-pelatanan'izy ireo satria ny vehivavy dia mijoro handray ny toerany avy ao anatin'ny sehatry ny orinasa izay anjakan'ny namany lahy hatry ny ela", hoy i Cuthbert.
Nasongadin'Andriamatoa Cuthbert Ncube ny fitomboan'ny fizahan-tany any amin'ny kaontinanta, ary nilaza i Afrika fa 15% ny mponina eran'izao tontolo izao nefa manodidina ny 3% amin'ireo mpizahatany eran'izao tontolo izao. Mba haharitra ny fizahan-tany Afrikanina dia tokony hisokatra ho an'ny mpizahatany isam-paritra sy iraisam-pirenena.
Cuthbert dia nilaza hoe: "Manantena izahay amin'ny maha ATB ny hampiroboroboana ny politika, ny lalàna ary ny lalàna, mba hanamorana ny fanjifàna maharitra sy ny vokatra azo avy amin'ny sehatry ny fizahantany manerana ny kaontinanta."
Nisongadina ny hetsika rehefa natolotry ny Filoha ny Fikambanana miaraka amin'ny taratasy fanamarinana maha-mpikambana ao amin'ny birao fizahan-tany afrikana izay natolotry ny departemantan'ny fizahantany sy ny departemantan'ny kolontsaina. Ny filoham-pirenena Angola Women in Business & Tourism Rtoa Angelina Martha Diamantino dia nahazo ny taratasy fanamarinana Ambassadorial satria notendren'ny Birao Mpanatanteraka hisolo tena ny ATB any Angola.
Amin'izao fotoana izao dia miankina amin'ny fitrandrahana harena ankibon'ny tany sy ny solika ny firenena ary heverina ho nakatona ho an'ny mpandeha izany. Mety hiova izany izao.
Angola dia manana ny mety ho iray amin'ireo zava-nisongadina nanaitra an'i Afrika. Mijanona ao anatin'ny sisin-taniny misy ny riandrano faharoa lehibe indrindra amin'ny kaontinanta, sisa tavela amin'ny tantaran'ny fanjanahan-tany Portiogey, zaridainam-pirenena misimisy, amoron-dranomasina feno fotony sy karazan'olona marobe tsy mampino.
Angola dia firenena afrikanina atsimo izay ny tanety isan-karazany dia misy ny morontsiraka tropikaly Atlantika, rafitry ny renirano sy ny efitra Sub-Sahara izay mamakivaky ny sisin-tany mankany Namibia. Ny tantaram-piainan'ny mpanjanatany dia hita taratra amin'ny sakafon-tsakafo Portiogey sy ny mari-pamantarana misy azy ao Fortaleza de São Miguel, trano mimanda naorin'ny Portiogey tamin'ny 1576 hiarovana ny renivohitra Luanda.
Raha vao haingana ny governemanta dia mamaha ny olana ara-politika eto amin'ny firenena, dia vao mainka mipoitra haingana avy ao amin'ny torimasony lava io ary mampiseho amin'izao tontolo izao izay tsy hita.
Ny filoha ATB Cuthbert dia nanipika izany tamin'ny kabariny mahery vaika ary nifantoka tamin'ny andraikitra lehibe raisin'ny vehivavy amin'ity dingana ity.
Fanambarana Boeing sy Biman Bangladesh Airlines ao amin'ny Dubai Airshow
Tantaran'ny hotely: YMCA an'ny Greater New York